Musharax H. Clinton o eedaymo dhanka farriimaha lagu soo oogey. – Radio Daljir
Musharax H. Clinton o eedaymo dhanka farriimaha lagu soo oogey.
Agoosto 10, 2016 10:57 g 0
Garoowe, Aug 11 2016–Fariimo dhowaan lasiidaayey oo dhowaan laga baahiyey musharax xilka madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Dimuquraadiga dalka Maraykanka Hillary Clinton, ayaa dhaliyey muran ku aadan xiriirka kadhexeeyey waaxda arrimaha dibadda Maraykanka oo ay wakiil ka ahayd iyo urur samafal oo ay maamusho.
Hadalhaynta ugu weyn ayaa kadhalatay in markii la ogaadey in Ms Clinton ay isticmaashay Email ama farriin baahiye u gaar ah markii ay hogaanka u haysay xoghaynta arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka intii u dhexaysay 2009 ilaa 2013.
Arbacadii shalay ayaa kooxaha dabagalku ay soobandhigeen 269 bog oo farriimood oo 44 kamid ah lasheegay in Ms Clinton aysan u adeegsan farriin baahiyaha ama Emailka waaxdii ay wakiilka ka ahayd.
Farriimahaan shalay la baahiyey iyo kuwa hore ayaa waxaa su’aalo badan dadka Maraykanku iskawaydiinayaan xiriirka kadhexeeyey waaxda arrimaha dibadda ee ay mas’uulka ka ahayd iyo Hay’ada Clinton Foundation.
DHEGEYSO-Salaad Cali Jeelle oo waraysi xiisabadan siiyey Daljir.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Caawa iyo Daljir iyo Cumar Laki Man.